सङ्क्रमितकाे सङ्ख्या ४ हजार नाघ्याे, आज थपिएका ३२३ कहाँका हुन् ?
काठमाण्डाै – नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या चार हजार नाघेको छ । मङ्गलबार तीन सय २३ जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएसँगै कुल सङ्क्रमितकाे सङ्ख्या चार हजार ८५ पुगेको हो । विभिन्न जिल्लाका गरी दुई सय ९२ पुरुष र ३१ जना महिलामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो ।
प्रादेशिक प्रयोगशाला विराटनगरमा गरिएको परीक्षणमा तीन जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । त्यस्तै कोशी अस्पतालमा इलामका एक र धरानमा गरिएको परीक्षणमा सुनसरीका एक र सप्तरीका ६ जना गरी सात जनामा सङ्क्रमण भेटिएको छ ।
प्रादेशिक प्रयोगशाला भरतपुरमा गरिएको परीक्षणमा चितवनका २४, नवलपुरका तीन, धादिङका एक, कपिलवस्तुका एक र सप्तरीका एक गरी ३० जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । त्यसैगरी प्रादेशिक प्रयोगशाला पोखरामा गरिएको परीक्षणमा म्याग्दीका एक, नवलपुरका १२ र बाग्लुङका ११ जनामा कोरोना पोजेटिभ भेटिएको हो ।
प्रादेशिक प्रयोगशाला जनकपुरमा गरिएको परीक्षणमा ४१ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । तीमध्ये धनुषाका २१, महोत्तरीका १९ र सर्लाहीका एक जना रहेका छन् । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा गरिएको परीक्षणमा दाङकै ६ जनामा सङ्क्रमण पाइएको छ ।
त्यस्तै भेरी अस्पताल प्रयोगशालामा बाँकेका नाै जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जुम्लाका दुई जनामा सङ्क्रमण भेटिएको हो । प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेतमा गरिएको परीक्षणमा सल्यानका १२ र सुर्खेतका चार जना गरी १६ जनामा सङ्क्रमण भेटिएको छ ।
त्यस्तै सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा दार्चुलाका १०, कञ्चनपुरका १९, डडेलधुराका सात र कैलालीका एक जना गरी ३७ जनामा सङ्क्रमण भेटिएको हो । प्रादेशिक अस्पताल रुपन्देहीमा रुपन्देहीका २० र कपिलवस्तुका २ गरी २२ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकु काठमाण्डौमा गरिएको परीक्षणमा एक सय २५ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । तीमध्ये धनुषाका २४, कपिलवस्तुका सात, महोत्तरीका ३१, पश्चिम नवलपरासीका १२, नुवाकोटका दुई, रौतहटका २१, सर्लाहीका १६ र सिरहाका १२ जनामा सङ्क्रमण भेटिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो ।
आज इलाम जिल्लामा पहिलो पटक सङ्क्रमण भेटिएको हो । अब सङ्क्रमित जिल्लाको सङ्ख्या ७२ पुगेको छ । मङ्गलबार थपिएकासहित तीन हजार सात सय ९८ पुरुष र दुई सय ८७ महिला रहेका स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालमा सक्रिय सङ्क्रमितकाे सङ्ख्या २५ हजार नाघ्याे
काठमाण्डाै – नेपालमा सक्रिय सङ्क्रमितकाे सङ्ख्या २५ हजार नाघेकाे छ । गएकाे २४ घण्टामा तीन हजार चार सय ३९ जनामा काेराेना भाइरसकाे सङ्क्रमण पुष्टि भएसँगै सक्रिय सङ्क्रमितकाे सङ्ख्या २५ हजार सात पुगेकाे हाे । अहिलेसम्म ९४ हजार दुई सय ५३ जनामा काेराेना सङ्क्रमण भएकाेमा ६८ हजार ६ सय ६८ जना निकाे&nbsp...
कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या २० हजार नाघ्यो, २४ घण्टामा तीन सय १५ जनामा पुष्टि
आज काेराेना पुष्टि भएका ४२१ जना कहाँका हुन् ?
काठमाण्डाै – नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या नाै हजार नाघेकाे छ । पछिल्लो २४ घण्टामा चार सय २१ जना थपिएसँगै कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि हुनेको कुल सङ्ख्या नाै हजार २६ पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । विभिन्न प्रयोगशालामा भएका परीक्षणमा अर्घाखाँचीका ७४ जनामा काेराेना पुष्टि भएको...
शुक्रबार थपिएका ४ सय २६ जना काेराेना सङ्क्रमित कहाँका ?
काठमाण्डौ - नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या ८ हजार २ सय ७४ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा ४ सय २६ जना सङ्क्रमित थपिएसँगै कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या ८ हजार २ सय ७४ पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा विराटनगरमा भएको परीक्षणमा ३ जनामा काेराेना पुष्टि भएको छ । जनकपुर...
नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या ६ हजार नाघ्यो, एकैदिन ४५१ थपिए
काठमाण्डौ – नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या ६ हजार नाघेको छ । आज एकैदिन चार सय ५१ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै नेपालमा कुल सङ्क्रमितकाे सङ्ख्या ६ हजार दुई सय ११ पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा गरिएको परीक्षणमा एक जना, वीरगञ्जमा भएको पर...
एकैदिन ४४८ जनामा कोरोना पुष्टि, सङ्क्रमितको सङ्ख्या ५ हजार नाघ्यो
काठमाण्डौ - आज थप चार सय ४८ कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन् । योसँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या पाँच हजार नाघेको छ । हि हिजो चार हजार ६ सय १४ सङ्क्रमित रहेकोमा आज थपिएकासहित पाँच हजार ६२ पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । सङक्रमण पुष्टि भएकामा आज थपिएकासहित चार हजार सात सय नौ जना पुरुष...
काठमाण्डाै – नेपालमा मङ्गलबार थप दुई सय ८८ जनामा कोरोना भाइरसकाे सङ्क्रमण पुष्टि भएकाे छ । पछिल्लो परीक्षणमा दुई सय ७० पुरुष र १८ जना महिलामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो । धुलिखेल अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा रौतहटका ३८ जनामा सङ्क्रमण पाइएको छ । गण्डकी प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा गरिएको परीक्षणमा पर्वतका ...